Massage maka nwatakịrị rue otu afọ
Ahụike ụmụaka bụ ihe kachasị mkpa ná ndụ ndị nne na nna. Ajuju nke mmepe na ahuike nke nwa a kwesiri ka ejiri ihe omuma na oru nile bia. Na ihe ziri ezi nke nne na nna ga-ewere na afọ mbụ nke ndụ nwatakịrị, ndụ ya dabeere. Ndị ọkachamara kweere na n'ime afọ mbụ nke ndụ nwa, dị ka plastine, kwesịrị itinye ego na ya, oge, ike. N'oge a, a tọrọ ntọala ahụ, nke ọ ga-ebi ndụ ya niile. Na nwatakịrị ị ga - achọ ka ọ rụọ ọrụ, n'agbanyeghị ma a mụrụ ya ma ọ bụ na ọ nwere nsogbu (nnukwu ma ọ bụ obere).
Usoro dị mkpa ma dị mkpa maka nwa amụrụ ọhụrụ, nakwa maka ụmụaka toro eto, na-eme ka ịhịa aka n'ahụ. Ọ nwere mmetụta bara uru n'ahụ ahụ nwa ahụ. Ịhịa aka na-akwalite mgbasa ọbara, ọrụ nke usoro dum gbasara obi, nakwa nke usoro anụ ahụ na ụjọ. Iji masị nwa ọhụrụ ruo otu afọ, ị nwere ike ịnwụ ọkachamara nwere nkà nke usoro a na ọkwa ọkachamara, ma ọ bụ gbalịa ime ya n'onwe gị.
Okwesiri iburu n'obi na n'agbanyeghi ka onye okachapu ahuhu si di nma, o nweghi onye puru icho aka nne ya. Cheta na ịhịa aka n'ahụ, karịsịa maka ụmụaka a mụrụ ọhụrụ, abụghị nanị usoro ọgwụgwọ, ọ bụkwa nkwurịta okwu nke nwatakịrị ahụ na nne ya.
Ụdị ịhịa aka n'ahụ na ọgwụgwọ nke ịhịa aka n'ahụ
E nwere ọtụtụ ụdị ịhịa aka n'ahụ - mgbochi, ndozi, ọgwụgwọ. A na-atụ aro ịhịa aka n'ahụ na-arụ ọrụ maka mmepe zuru ezu nke ahụ nwata ahụ, ọ malitere ime n'oge ahụ mgbe nwa ahụ dị afọ 1.5-2. Ndị nne na nna nwere ike ime ụdị ịhịa aka n'ahụ onwe ha, ma ọ bụ na ha nwere ike ịgbanwu ọkachamara maka enyemaka. Otú ọ dị, a na-atụ aro ka ị kpọtụrụ onye na-ahụ maka pediatricia tupu ịmalite usoro ịhịa aka n'ahụ n'onwe gị.
Ndị na-agwọ ọrịa na-edozi ọgwụgwọ na ọgwụgwọ. Kedu ụdị mgbagwoju anya nke usoro ga-abanye n'ime ha dabere na ụdị ọrịa a na-ekpughe na nwa.
N'ihe dị ka ọnwa abụọ, nwa akwụkwọ ga-enyocha nwa ahụ ma ọ bụ dọkịta na-awa ahụ, dịka nchọpụta nke nchọpụta dị otú ahụ si dị, a na-edekwa nke a ma ọ bụ ụdị ịhịa aka n'ahụ.
Elegharala aro ndị dọkịta na-atụ anya na ọ bụrụ na a na-edozi ịhịa aka n'ahụ, mee ka nwa ahụ gaa usoro ahụ. Nke a dị mkpa karịsịa n'afọ mbụ nke ndụ nwatakịrị, ebe ọ bụ na ọ na-enyere aka ịnagide ọtụtụ nsogbu ahụ ike.
Ọkpụkpụ aka dị irè na ọrịa ndị na-arịa ọrịa (ụkwụ ụkwụ, dysplasia, ụkwụ elu, scoliosis), na ọrịa respiratory (bronchitis, pleurisy, rhinitis, asthma bronchial), na ọrịa ọgwụgwọ (rickets, hernia, krivoshe, hypotrophy, hyper- na nkwupụta ụda), na ọrịa nke usoro nsị, tinyere usoro nhụjuanya ahụ.
Ọ bụrụ na a mụrụ nwa ahụ n'oge akaghi aka, enwere ọrịa ụfọdụ, ndụmọdụ ọkachamara maka ụmụaka agaghị akwado ya, kama ọ bụ iwu.
Echela onwe gị, ndị ọkachamara tụkwasịrị obi.
Contraindications na ịhịa aka n'ahụ
A na-egbochi ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere ọrịa ọ bụla: oke ọkụ, purulent na ọnya ndị ọzọ na-egbu egbu nke epithelium anụ ahụ, abụba subcutaneous na nnukwu akụkụ, nakwa usoro mmebi ahụ na lymph, muscle, ọkpụkpụ anụ (pemphigus, eczema, lymphadenitis, osteomyelitis, impetigo, phlegmon, wdg). A na-egbochi ịhịa aka n'ahụ na ọrịa ndị na-eduga ná fragility na ịdị nro nke ọkpụkpụ, nnukwu ụdị nke rickets, nnukwu ọrịa ogbu na nkwonkwo, ụkwara nta nke nkwonkwo na ọkpụkpụ, ntụpọ obi mgbarụ, nnukwu nsị, ịba ọcha n'anya nke dị iche iche etiologies, nwere nnukwu mkpụrụ, hip, umbilical na scrotal hernias , tinyere ọnwụ nke akụkụ abdominal ma ọ bụ ọchịchọ nke imegide ha. N'ọnọdụ ndị ọzọ, na ọnụnọ nke hernias, ọ ga-ekwe omume ịhịa aka n'ahụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka mgbatị ya.
Cheta na ọ bụrụ na nwatakịrị nwere nsogbu ahụike, a ghaghị ime usoro ịhịa aka n'ahụ n'ụzọ dị nro na nkọwa na nkọwa nke onye dọkịta na-aga, yana nanị site n'aka onye ọkachamara - ọkachamara nwatakịrị.
Kedu ụkpụrụ ndị ị ga-ahọrọ stroller maka nwatakịrị?
Ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ croup na ụmụaka
Kedu ihe ị ga-eme mgbe nwatakịrị anaghị erubere ya isi ma bụrụ onye na-asọ oyi?
Enweghị ihe na-eto eto na-eto eto: ngosipụta, igbochi
Ihe na-akpata na nsogbu nke ọrịa anaemia na ụmụ
Ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ rickets na nwa
Kedu oche ụgbọala maka ụmụaka ka mma ịhọrọ?
Nri ndị China: gịnị ka Chinese na-erikarị?
Lemon na achịcha oyibo
Achicha na ude arama na udara apụl
Esi mee ka onwe gị rie nri
Kedu ka ime ihe ike n'ime ezinụlọ si emetụta mpụ nke ndị na-eto eto n'ọdịnihu?
Kedu ihe na-ezighi ezi na Hillary Clinton? Ndi onu ogugu akwukwo a ga - enwe ndu tupu ntuli aka?
Mmiri Ọbara Vampire
Esi kwadebe ulo
Uche ejiji: usoro ugbu a 2016
Ejikere maka anya dị nso
Erreum eririum laser
TOP-5: Ebe kacha mma na ụlọ ndị Crimea
Akwụkwọ nri na batter na chutney ihendori
Ngwọrọgwu ụmụ mmadụ megide ntutu isi